​प्रोफेशनल दियालो विकास वैंकको सातौ शाखा बुटवलको योगीकुटीमा
काठमाडौं । प्रोफेशनल दियालो विकास बैक लि. ले आफनो सातौ शाखा बुटवलको योगीकुटीमा आजबाट संचालन गरेको छ । उक्त शाखाको उदघाटन रुपन्देही व्यापार संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्री मोतीलाल पाण्डेय, नेपाल राष्ट्र..
​ग्लोबल आइएमई बैंकले बाँड्यो निलबाराहीमा राहत
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित निलबाराही चौरमा अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेका २३३ भूकम्प पीडित घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीबाट निलबाराही आएका भूकम्प पीडितलाई राहतस्वरुप..
​१० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारि गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्र बैंकले असार १० गते चौथो पटक विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । यसअघि..
​मेगा बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा सुरजसिंह ठकुरी
काठमाडौं । मेगा बैंकले चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता, कलाकार तथा निर्देशक सुरजसिंह ठकुरीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ । आगामी दिनमा बैंकको ब्रान्ड इमेजलाई ग्राहकसामु स्थापित गर्न ठकुरीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरिएको..
​गरिमा विकास बैंक र निलगिरी विकास बैंक गाभिने, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने
काठमाडौं । पोखराको महेन्द्रपुलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गरिमा विकास बैंक र म्याग्दीको बेनीमा प्रधान कार्यालय रहेको निलगिरी विकास बैंक एकआपसमा गाभिएर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने भएका छन । गरिमाको आइतबार..
​माछापुच्छ्रे बैंक र युएई एक्स्चेञ्जबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र युएई एक्स्चेञ्जबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका नायब महाप्रबन्धक सुमन शर्मा र युएई एक्स्चेञ्जका अध्यक्ष सीए सुधिर कुमार सेट्टी वाईले हस्ताक्षर..
लक्ष्मी बैकको हकप्रद शेयर निष्काशन, शेयरधनीले दश बराबर तीन कित्ता शेयर पाउने
काठमाडौं । लक्ष्मी बैक लिमीटेडले आईतबारबाट रु १०० अंकित ७० लाख १३ हजार ६ सय ६ कित्ता हकप्रद शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले २०७२ साल जेठ २०..
​प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा प्रभु समूह, प्रभु बैंक र सहयोगीबाट तीन करोड हस्तान्त्रण
काठमाडौं । प्रभु समूहले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा तीन करोड रुपैयाँ सहयोग हस्तान्त्रण गरेको छ । कोषमा प्रभु समूहले एक करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा..
आइएमइ समूहले किनेको एनबी इन्स्योरेन्सले कारोबारको अनुमति पायो, नाम परिवर्तन गरेर ग्लोबल इन्स्योरेन्स बनाइने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमइ समूहले किनेर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि समस्याग्रस्त एनबी इन्स्योरेन्सको कारोबार फुक्का भएको छ । नयाँ समूहले कम्पनीलार्इ सुधार गरेर सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्वतासहितको कार्ययोजना बुझाएपछि नियामक निकाय..
प्रभू बैंकले ग्राण्ड बैंक किन्ने पक्का, शाखा र पूजिको आधारमा ठुलो बैंक बन्ने
काठमाडौं । प्रभू बैंकले ग्राण्ड बैंक किन्ने (एक्वायर) गर्ने पक्कापक्की भएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रभूलाई ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्न आसयपत्र दिएको छ । ‘प्रभू बैंकले..
​प्रभु बैंक र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघबीच सम्झौता
काठमाडौ । प्रभु बैंक लिमिटेड र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघबीच बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघमा आबद्ध रहेका देशभरका सदस्य संस्थाहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा..
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले मोरङको सुन्दरपुर र कटहरीमा, सिराहाको धनगढी र फुलवरीयामा शाखा
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले चार स्थानमा शाखा विस्तार गरेको छ । यो माइक्रोफाइनान्सले मोरङको सुन्दरपुर र कटहरीमा, सिराहाको धनगढी र फुलवरीयामा शाखा विस्तार गरेको हो । सस्थाका अध्यक्ष केशव..
​जस्ता बेच्न खोजेको आरोप लागेका रमेश महत कृषि विकास बैंकको सञ्चालकमा निर्वाचित
काठमाडौं । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भूकम्पले क्षतिग्रत नुवाकोटका विद्यालयका लागि दिएको जस्ता बिक्री गर्न खोजेको आरोप लागेका रमेश महत कृषि विकास बैंकको सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतका भतिजा..
एनआईबिएल क्यापिटलको डिम्याट खातामा पनि अनलाइन सेवा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सब्सिडरी एनआईबिएल क्यापिटलले मंगलवारबाट डिम्याट खातामा पनि अनलाईन सेवा सुरु गरेको छ । अबदेखि एनआईबिएल क्यापिटलका डिम्याट ग्राहकले आफूसँग डिम्याट खातामा कुन कम्पनीको कति सेयर छ,..
​कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकको १६ प्रतिशत लाभांस पारित
काठमाडौं । कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सातौ बार्षिक साधारणसभाले १६ प्रतिशत लाभांस अनुमोदन गरेको छ । सभाले १२ प्रतिशत नगद र चार प्रतिशत वोनस सेयर प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले..
​नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आठ प्रतिशत नगद तथा साठी प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीलाई आठ प्रतिशत नगद तथा साठी प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार बीरगन्जमा सम्पन्न कम्पनीको पन्ध्रौ साधरण सभाले आर्थिक..
​प्राइम कमर्सियल बैंकले जस्तापाता बाँड्यो
काठमाडौ । प्राइम कमर्सियल बैंकले गोरखा जिल्लामा १ सय ४१ परिवारलाई जस्तापाता राहतस्वरुप वितरण गरेको छ। बैंकले गोरखा नगरपालिका १५ स्थित कुमाल गाउँका विपन्न ८९ घर धुरीलाई प्रति घर धुरी..
कृषि विकास बैंकले बोनस सेयर र नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को मुनाफाबाट आफ्ना साधरण सेयरधनीलाई सात प्रतिशत बोनस सेयर र ८ दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकको सम्पन्न आठौँ..
​शसिन जोशीले एनआइसी एसिया बैंक छाडे
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले बैंक छोडेका छन् । कार्यकाल पुरा भएपछि जोशीले बैंक छोडेका हुन । उनी विगत एनआइसी एसिया बैंकमा १२ वर्षदेखि सीइओ..
लुम्विनी बैंकले ल्यायो १ देखि १६ वर्षका लागि 'उज्वल तारा बचत खाता', सुविधा आकर्षक
काठमाडौं । लुम्विनी बैंक लिमिटेडले १ दिने शिशुदेखि १६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरी लुम्विनी उज्जवल तारा बचत खाता ल्याएको छ । लुम्विनी उज्जवल तारा बचत खाता न्यूनतम ५०० रुपैयाँमा खोल्न सकिनेछ..
​प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । भूकम्प पीडितहरुको सहयोगार्थ नबिल बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बिहिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष..
​खोटाङको लामिडाँडामा सेञ्चुरी बैंकको शाखारहित बैकिङ
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकल बुधबारदेखि खोटाङ्ग लामीडांडा गाविस ९ बाट शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । बैकले यसअघि नै कञ्चनपुरको त्रिभुवनवस्ती भोजपुरको दिंगला, धनगढीको चौमाला, रौतहटको गरुड, बर्दियाको बाँसगढी..
प्रधानमन्त्री कोषमा कृषि विकास बैंकले ३ करोड ६१ लाख दियो
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषमा डेढ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष प्रमोदकुमार कार्कीले डेढ करोडको चेक बुधवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण..
​प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरले हेल्प एज इन्टरनेशनल मार्फत भूकम्प पिडितलाई सहयोग
काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका भूकम्प पिडितहरुलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग रकम नेपाल स्थित स्थानीय प्रतिनिधि संस्था हेल्प एज इन्टरनेशनल मार्फत् प्रभु बैंक लिमिटेड र प्रभु मनि..
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा रु १० लाखको सहयोग
काठमाण्डौ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसिएचएल) ले भुकम्प पीडितहरुको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार कोषमा रु १० लाख रकम सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोग रकमको चेक एनसिएचएलका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी र..
बैंक खाता खोल्न नागरिकता नचाहिने, बैंकहरुलाई पनि खुकुलो ब्यवस्था
काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सर्वसाधारणले नागरिकता विनै बैंक खाता खोल्न पाउने भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नको लागि नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य थियो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका..
​इजी लिंक रेमिट्यान्स र लुम्बिनी बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं । लुम्बिनी बैंक र इजी लिंकबीच रेमिटेन्स भुक्तानी संझौता भएको छ । संझौतापछि इजी लिंक रेमिटेन्स मार्फत आएको रेमिटेन्स लुम्बिनी बैंकबाट भुक्तानी लिन सकिनेछ । उक्त सम्झौतापत्रमा इजी लिंक रेमिट्यान्सका..
​प्रभुले उन्नतशिल र आर्दश मुद्दति खातामा सञ्चालनमा ल्यायो
काठमाडौं । प्रभु बैंकले वार्षिक अधिकतम ७.७५ प्रतिशत व्याजदर दिनेगरी उन्नतशिल खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । न्युनतम एक लाख रुपैयाँ राखेर उक्त खाता खोल्न सकिने छ । त्यस्तै ५५ वर्ष भन्दा..
​मेट्रो डेभलपमेन्ट बैकको छैटौँ शाखा लेखनाथमा
काठमाडौं । पोखराको न्युरोडमा प्रधान कार्यलय रहेको मेट्रो डेभलपमेन्ट बैँकले कास्कीको लेखनाथमा छौटौं शाखा स्थापना गरेको छ । बैँकको अहिले अधिकृत पुँजी ३० करोड र चुक्ता पुँजी १८ करोड ५६ लाख..
​राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले दमौलीमा खोल्यो नयाँ शाखा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले तनहुंको सदरमुकाम दमौली बजारमा सोमवार आफ्नो नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । बैङ्कको १६१ औ शाखाको रुपमा स्थापित उक्त शाखाको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण..
Results 1896: You are at page 57 of 64